६५ प्रतिशत हकप्रद निस्कासन गर्दै मेगा बैंक
काठमाडौं। मेगा बैंक नेपालले ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले हकप्रद निस्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग गरेको छ। हकप्रद सेयर निस्कासन गर्नका लागि बैंकले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई निस्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। बैंकले अहिलेको पूँजीको दुई अर्ब ९७ करोड ८५ लाख तीन हजार ४३३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले जानकारी दिए। हकप्रद निस्कासनपछि चुक्ता पूँजी सात अर्ब नाघ्ने छ। बैंकले बाँकी पूँजी चालु बर्षको...बाँकी
June 29, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौँ, १५ असार । धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको भन्दै नेपाल धितोपत्र दलाल व्यवसायी सङ्घले विरोध जनाएपछि आज सेयर कारोबार प्रभावित भयो । बोर्ड र सङ्घबीच वार्ता भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केपछि बजारमा कारोबार रोकिएको हो । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा आज सेयर कारोबार हुन नसकेपछि लगानीकर्ता निराश भएर फर्केका छन् । कारोबार सुरु हुने समय बिहान ११ः०० बजे नै सङ्घले विरोध जनाएपछि बजार प्रभावित भएको थियो । सङ्घका अध्यक्ष नर...बाँकी
१५ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजस्व, ऋण, अनुदानबाट प्राप्त सहयोग अनुशासित रुपमा खर्च गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कडा रुपमा काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वित्तीय अनुशासनहीनतामा चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने बताएकी छन् । “प्रत्येक वर्ष बेरुजु कहालीलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बेरुजु छिटो फछ्र्योट हुनुपर्छ, आ...बाँकी
बैंकहरुलाई शेयर कारोवार अनुमति लाइसेन्स दिन किन ढिलाई ?
June 28, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकलाई शेयर कारोबार अनुमति दिन आलटाल गरिंदै आएको छ । शेयर बजार सुधार गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड सकारात्मक देखिएतापनि शेयर दलाल कम्पनीहरुको एकाधिकारको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । जबसम्म आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बैकंहरुमार्फत सहज रुपमा शेयर कारोवार गर्न अनुमति दिईदैन तबसम्म बजारमा अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन । यसको लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई समेत शेयर दलालको कार्य गर्ने गरी आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २...बाँकी
कर फस्र्याैट आयोगको राज्यविरुद्धको अपराध
June 27, 2017 Posted by Jhilko.com
कर फछ्र्यौट आयोगले कतिसम्म अपराध गरेको छ भने १० वटा करदाताबाट मात्र १२ अर्ब रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसमा १० अर्ब छुट दिएर २ अर्ब मात्र असुल गरेको छ । यो ठगी मात्र होइन, राज्यविरुद्धको अपराध हो । ‘तपाईहरुले अहिले मलाई बन्दीको ब्यवहार गरेर पेलिरहनु भएको छ । पेल्न सकुन्जेल पेल्नुस् । तर, जति पेले पनि कर फछ्र्यौट आयोगले दिएको अधिकार अनुसार मैले मुद्दा जित्छु । त्यसपछि देख्नुहोला । हेर्नुृस्, म पनि मुख्य सचिवको दावेदार हु ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगक...बाँकी
'वनको सट्टा वनै उपलब्ध गराउ’
June 26, 2017 Posted by Jhilko.com
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सर्त अघि सारेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउन भनेको हो । मन्त्रालयको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग...बाँकी
इण्डोनेशियाली कम्पनीसँग विमान आपूर्ति सम्झौता
June 22, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । इन्डोनेसियाली एरोस्पेश निर्माता कम्पनी पीटी डरगाण्टारा (PT Dirgantara) ले बहुउद्देश्यीय विमान आपूर्ति गर्न नेपालसँग एउटा सम्झौता सुरक्षित गरेको बताएको छ । उक्त कम्पनीको आधिकारिक ट्वीटरमा पोष्ट गर्दै PTDI करार १८ जुनमा हस्ताक्षर भएको बताउँदै विमानको अपरेटर नेपाली सेना हुने उल्लेख गरेको छ । यो CN235-220 भीआईपी परिवहन, सेना र कार्गो परिवहन, औषधि आपूर्ति र अन्य आवश्यक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ । साथै उक्त विमान अठार महिनाभित्र नेपाल आइपुग्ने अपेक...बाँकी
कर्मचारीको निवृत्तिभरणको बोझ कम गर्ने योजना
मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनी बढ्दै गएको निवृत्तिभरणको बोझ कम गर्न सरकारले राष्ट्रसेवकको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ र हाम्रा सामु दोस्रो चरणको निर्वाचन सन्निकट छ । अब स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने दायित्वका सरकारका सामु रहेको छ । सरकारले करिब ८३ हजार कर्मचारी स्थानीय तहका लागि थप्नुपर्ने आंकलन गरेको छ । के ती सबै कर्मचारीलाई हाम्रो बजेटले उपदान, पेन्सनको दायित्वलाई पूरा गर्नसक्ला ? अहिले बह...बाँकी
डा. रामशरणको पछिपछि डा. बाबुराम पनि
नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुख्यतः धारासायी पार्ने काम निजीकरण र उदारीकरण नीतिले ग¥यो । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनसँगै विश्वमा उदारीकरण र निजीकरणको हावा वेजोडले चल्यो र नेपालमा नेपाली कांग्रेस र खासगरी डा. रामशरण महतमार्फत् यो नीतिलाई नेपालमा लागू गराइयो । यो बीचमा वामपन्थीका नामका सरकार पनि बने । आधा दर्जन अर्थमन्त्री बने । त्यसलाई पछ्याउने नै काम भयो । अरु त अरु आफूलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको अध्येता दावी गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईले समेत अर्थमन्त्री भएका बखत डा. रामशरणकै बाटो...बाँकी
अब मोबाइलवाट नगदरहित कारोबार
June 20, 2017 Posted by Jhilko.com
नेपाल सरकारले दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त पहलमा नगदरहित कारोबारमा आधारित ‘मोबाइल मनी’ प्रविधि लागू गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । मोवाइल मनी सेवा मोबाइल प्रयोग गरेर नगदविना नै कारोबार गर्न सकिने नगदरहित ब्यवस्था हो । अहिले यसको मोडालिटी तयार हुने क्रममा रहेको छ । जसअनुसार कारोबार गर्न ग्राहकले आफ्नो बैंकमा रहेको खाताबाट एउटा कोड नम्बर प्रयोग गरी कारोबार गर्न सकिने छ । दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार मोवाइल मनी सेवा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रयोगमा ल्या...बाँकी